China Multi-dzoka Electric Actuator fekitari uye vagadziri | Nortech
Chii chinonzi Multi-turn Electric Actuator?
Multi-dzoka Electric Actuator HEM akateedzana chizvarwa chitsva chemazhinji-shanduka emagetsi ekugadzirisa zvakagadzirwa uye kugadzirwa nehunyanzvi timu ye NORTECH zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi uye makore ekuziva ruzivo.
Main maficha eMulti-dzoka Magetsi Actuator
Dhizaini yeHEM akateedzana mactuator akafunga nezve chishandiso munguva dzakaomesesa, uye zvikamu zvakashandiswa zvakaongororwa zvakanyanya uye kuyedzwa kuve nechokwadi chekuvimbika kwenguva refu kwemidziyo. Zvichienderana nemakore ekugadzira uye ekugadzira ruzivo muactuator indasitiri, yega actuator inoongororwa dura neyakagadzika isati yasiya fekitori kuti ive nechokwadi chenguva refu uye yakavimbika mashandiro eactuator pasi pemamiriro akasiyana ekushanda. Chizvarwa chitsva chevashandisi chine nzira yakanyanyisa yekugadzirisa; iyo yakagadziriswa chiratidzo chekugadzirisa nzira ine yakakwana kudzivirirwa kune yekukanganisa chiratidzo pane yekudzora chiratidzo; iyo yemagetsi mhango iri yakapetwa kaviri-isina mvura dzimba, uye inobata ruoko infrared setter inogona kushandiswa. Gadza akasiyana parameter emagetsi actuator, uye zvese zvinhu zvinosangana nezvinodiwa zvekuputika-chiratidzo giredhi.
2.Nyore yekugadzirisa kusanzwisisika
Kugadziriswa uye kugadziridzwa kwesoftware zviri nyore uye zvakanyanya mushandisi-zvine hushamwari, ine ichangogadzirirwa man-muchina interface, mamenu emifananidzo ari nyore kunzwisisa, akasanganiswa nemirayiridzo inoenderana yekuita kuti chero marongero eparamende ave nyore. Kuona kuti maparameter akaiswa nenzira kwayo uye nekuchengetedza kuchengetedzeka kwavo ndiyo hwaro hwekushanda kwakatsiga. Iyo yekumisikidza interface inowanda, ichipa dzakasiyana siyana sarudzo yekusarudzika, kumisikidza, kuongororwa uye mamwe mabasa, uchishandisa yakakwira-chaiyo dot matrix matrix, iyo inogona kushandura zviri nyore pakati peChinese neChirungu kuratidza, vashandisi havafanirwe kurangarira akawanda mavara ekuzivisa, chete tevera kukurudzira pane iyo skrini. Debugging iri nyore kuchinjika kune akasiyana mashandiro enharaunda.
3. Multiple control nzira
Iyo HEM yakateedzana macult-turn actuators inogona kupa akasiyana siyana akawedzera masimba ekudzora pahwaro hwerudzi rwekutanga switch uye mhando yekugadzirisa, kusanganisira akasiyana mabhazi emabhizimusi akadai seModbus-RTU uye Profibus-DP. Inokodzera dzakasiyana kudzora zvido.
4. Yakakwana yekuzviongorora uye yekuchengetedza basa
Inogona kuongorora mota kuwandisa, kupisa uye chinzvimbo chemagetsi. Iyo inogona zvakare otomatiki kuzivisa chikamu chematatu-chikamu magetsi magetsi. Hakuzovi nekushomeka kusashanda zvakanaka nekuda kwekuchinja kwewiring. Mune emergency, iyo actuator inogona kuitirwa munzvimbo kana kumhanyisa kufambisa Iyo yakatarwa chengetedzo nzvimbo; iyo actuator zvakare inokwanisa kuyera chaizvo iyo inobuda torque, uye chengetedza iyo vharuvhu panguva yekushanda kudzivirira vharafu kuti isabatike; kana iyo vharuvhu yakanamatira, kana chiratidzo chekutanga chatumirwa, hakuzove nechero chiito, wedunhu remafungiro anogona kudzima mota kudzivirira mota kubva pakupisa uye kutumira alarm chiratidzo;
Tekinoroji yehunyanzvi ye Multi-dzoka Electric Actuator
Multi-dzoka Electric Actuator ainyanya kushandiswa kudzora mavharuvhu uye vanoumba magetsi mavharuvhu. Inogona kuiswa nevhavha yepasi rose, mavhavha egedhi, nezvimwe, uye yakakura saizi bhora vharuvhu, mavharuvhu, mavharuvhu, pamwe nechikamu cheki gearbox kudzikisa kukosha kwetoriki, uchishandisa magetsi pachinzvimbo chevanhu vetsika kudzora kutenderera kwevhavha kudzora mweya, mvura , steam, dzakasiyana siyana dzinokanganisa midhiya, matope, oiri, mvura simbi uye radioactive midhiya. Kuyerera kwemvura uye nzira
Pashure: Chikamu shandura Electric actuator Kuputika Proof LQ modhi
yemagetsi actuator yegedhi vharafu